Software ọdịda peeji nke Formstack
Tuzdee, Machị 29, 2011 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Douglas Karr
Bravo nye ezi ndi enyi m Mpempe akwụkwọ - na uche m - Premiya onye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetị maka ndị ahịa (ee, nke ahụ bụ njikọ njikọta). Otu ọrụ siri ike anyị na ndị ahịa anyị nwere mgbe anyị na-ewu atụmatụ peeji nke ọdịda bụ n'ezie akụrụngwa iji wuo peeji ọdịda ahụ.
Ọ bụghị nsogbu ọzọ! Mpempe akwụkwọ ka tọhapụrụ ya ọdịda Page ngwọta wuo peeji ndị gbara gị gburugburu Mpempe akwụkwọ ụdị.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ azụmaahịa inbound, ọ dị ka ọgaghị adị mma karịa Mpempe akwụkwọ iji wuo ma hazie peeji ọdịda gị. Nwere ike iwepụta otu maka mkpọsa ọ bụla na obere mbọ!
Tags: formsmpempe akwụkwọmbido peeji nke
Ntugharia Ntughari Google 5
Mar 29, 2011 na 10: 23 PM
Ibe ọdịda ọhụrụ a nwere ike ịrụ ọrụ maka PPC? Kedu ihe mgbochi na URL?
Mar 31, 2011 na 8: 16 PM
Chris site na ihe Ive hụrụ, ị ga-eji url kpuchiri ekpuchi iji nweta ibe ahụ ka ọ gosi dịka ịchọrọ. O doro anya na nke a ga-agbanwe ka oge na-aga